IWINDOWS EPHUKAYO (AMAWINDI APHUKAYO)
Date:28 May 2018 Author: Brendon Petersen Tags:Breaking Windows, Empowerment Issue, isiZulu, Microsoft, Microsoft SA
UMicrosoft South Africa unenkingana maqondana nokuphathelene nezikulukuqu zekhompuyutha. Noma singathi nje, inkinga yamathuluzi. Ngokwemibiko yeMicrosoft Global yekwata lesithathu onyakeni ka-2018 maqondana nezimali ezingenayo, le nkampani enkulu yezobuchwepheshe seyenze uguquko kwi-Surface – okungumnyango obheka izindaba eziphathelene nezikulukuqu zekhompuyutha – yayenza yaba yibhizinisi elingenisa izigidigidi zamadola. UHololens unikeza uToyota amandla okwenza umbononhloso mayelana nendawo yokusebenza yasesikhathini esizayo kube yinto eyenzeka ngempela. Ikomkhulu lethu lesifunda lakwa-MS lilandela ingxenye eyodwa yebhulu lamasu lomhlaba wonke futhi seliqala ukusebenzisa isu layo lamathuluzi ngokusebenzisa impahla yabanye abantu. Manje-ke le nkampani izosiza kanjani kwezomnotho zasekhaya ngokuba incintisane ngokuba sezingeni lomhlaba wonke. Kuyinto elula kakhulu lokho.
Enye yezimboni ezinkulu eNingizimu Afrika yimboni yokudla okuyizinhlamvana, kanti abakhiqizi abelokudla okusetshenziwe baseJalimane abaziwa nngokuthi ngabakwaBuhler AG, basungula uhlelo lokuhluza kahle elaziwa ngokuthi yiLumoVision ukwenza ngcono izinga lwezinhlelo zokuba ukudla kuhlale kukhona. Lobu buchwepheshe busimeme ngokugcwele kwaMicrosoft Azure futhi bufika nesisombululo esisheshayo nesishaya emhloleni sohlelo lokuhluza uhlobo lokudla okusanhlamvana olususa amaphesenti angu-80 kuya kwangu-90 okudla okusanhlamvana okungcolile nokudungekile, uma kuqhathaniswa nalokho okwenziwa ngendlela yokusebenzisa imishini yakudala yokuhlunga , kona okukhuculula ngesigamu esinguhhavu salokho okwenziwa yilobu obunye buchwepheshe.
Ophathina benkampani yakwaStandard Bank neyakwa-Old Mutual abasezingeni lomhlaba, iSaxo’Bank, engeyokudabuka eDenmark, bangezinye zezinkampani zezezimali esezikhethe ukuzithathela masisha lolu hlelo lwe-Al – nezinye zezikhungo zezezimali ezingaphezu kwamaphesenti angu-80 ezisebenzisa iMicrosoft Azura. Lokhu kwenza sekwenze ukuba iSaxo Bank inikele izinhlelo zayo zokubhanga emakhasimendeni ayo kwezokubhanga nakwezokuthengisela emazweni angu-170. Kukhona nezinye izindlela zokusebenzisana kwezobuchwepheshe , I-Azura yasiza inkampani esebenza ngokuphathwa kwempahla eyaziwa ngokuthi yi-Eagle Investment Systems ukuba yakhe isizinda esigcineke emafini obuchwepheshe bekhompuyutha esilondoloza imininingwane, sokuhlela kahle impahla kwi-Azura ukuze ihlinzeke abaphathi bezokonga ngamathuluzi azosebenza nasesikhathini esizayo.
I-Office 365 ingabala abakhiqizi bezimoto abasabalele emazweni amaningi bakwaJaguar nabakwaLandrover njengabanye bamakhasimende abo ebhizinisini abangaphezu kwezigidi ezingu-150. Le bhrendi ekhonzwe kakhulu iqashe abantu abangu-43 000 emazweni angu-130, kanti i-Office iyakuvumela ukuba kusetshenzwe ngendlela abantu abafuna ukusebenza ngayo ukuze kuvele ubuciko kanye nokusebenzisana kwabo bonke abasebenzi ngendlela enokuphepha. Enye inkampani eqinisa amandla eMicrosoft 365 yiCoca-Cola.
UMicrosoft unawo wonke amathuluzi kodwa abaholi kwezamabhizinisi nosomabhizinisi badinga ukufundiswa ukusebenzisa lobu buchwepheshe ngendlela eyimpumelelo. Futhi yiyona nkinga abakwaMicrosoft South Africa abazama ukuyisombulula njengamanje.
“Sinenkinga enkulu eNingizimu Afrika maqondana nentsha,” kusho uMqondisi Ophethe kwaMicrosoft SA, uZoaib Hoosen.
“Uma uhlanganisa lokho nenkathi yohlobo lwesine olukhulu kwezezimboni (i4IR) nokudingeka ukuba intsha ikwenze, sizwa sengathi sisesimweni esikahle sokuba siphonse okuthize esivivaneni maqondana nalesi sihloko.”
Isikhathi sokuba kusetshenziswe abantu sikaSishwabehi (UKlaus Schwab, umsunguli kanye nosihlalo omkhulu weWorld Economic Forum) uHoosen akhuluma ngaso cishe sihlanganisa ndawonye zonke izisombululo zobuchwepheshe ezivelayo ezinjenge-Al, ubuchwepheshe obuphathelene namarobhothi, ubuchwepheshe bokuxhumana kwezinto ukuze kuthunyelwe noma kwemukelwe imininingwane, ucwaningo maqondana nokuthuthukiswa kokuphathelene nekhompuyutha ngokulandela imigomo yesilinganiso samandla kanye nocwaningo lwezinto ezincane kakhulu kanye nokusebenza kwazo, zibe yiqoqo lezimboni ezizochasisa ngesikhathi esisha sokuthuthukiswa kwabantu. Lobo buchwepheshe, njengamanje, buletha uguquko ezinhlelweni zokukhiqiza nokuphatha ngendlela okubuye kube nzima ukuhambisana nayo maqondana nokulawula.
Emabangeni ezemfundo ayisisekelo, inhloso ngukujwayeza abantwana ubuchwepheshe nokubenza ukuba bafeze imisebenzi enzima ngendlela ethokozisayo. Umdlalo Wokwakha Izinhlaka Ngamabhokisi (iMinecraft): Uhlelo Lwezemfundo ngolunye lwamasu asemqoka kwaMicrosoft kuleli zinga.
“Sifuna ukwenyusa izinga lokukwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe bamakhompuyutha kuyo yonke intsha. Enye yezindlela esifuna ukufeza lokhu ngayo ngeyeThint’iMillion, esisanda kuyimemezela ngokuhlanganyela noHulumeni Wesifundazwe SaseGauteng (iGPG).”
Lolu hlelo lokufunda kwenqwaba yabantu kusetshenziswa ikhompuyutha luhlose ukudlulisela phambili amakhono asemqoka ezobuchwepheshe bekhompuyutha eqoqweni lezifundo zeMicrosoft. Ngokocwaningo olusanda kwenziwa maqondana neNhlangano Yokuthuthukiswa kwezimboni, i-Office ithatha indawo yesithathu emakhonweni adingeka kakhulu kulabo abafuna umsebenzi njengoba kwavela uma kuhlaziywa imisebenzi eyayikhangisiwe eyizigidi ezingu-14,6 okwakwenziwelwa lolu cwaningo.
Ngokwezibalo zakamuva zenhlolovo yakwaStats SA yekwata maqondana nabasebenzi, cishe angu-30 amaphesenti entsha yaseNingizimu Afrika eneminyaka engu-15 kuya kwengu-24 engaqashiwe kumbe engabhalisile ohlelweni oluthize lwezemfundo noma zoqeqesho,” kuchaza uHoosen.
Uhlelo lweThint’iMillion lwethulwa njengohlelo lweGPG Tshepo 1 Million okuyisu lokuthuthukisa amakhono entsha. Lo mshikashika wakhelwa ukuhlakaza izihibe intsha ehlangabezana nazo uma ibheka imisebenzi, kanti futhi ihlinzeka ngqo, izinhlelo zemisebenzi kahulumeni, amathuba amabhizinisi amancane kanye nemisebenzi ehleleke ngokusemthethweni. Abafanelwe ukungena kulolu hlelo kumele kube izakhamizi zaseGauteng ezingasebenzi ezineminyaka engu-18 kuya kwengu-34, abaphase iBanga 10 lokufunda okungenani kwezemfundo ehleleke ngokusemthethweni nabanesipiliyoni esingevile ezinyangeni ezingu-12.
Ukwethulwa kwezifundo kwenziwa ngohlelo lokuqeqesha olwaziwa ngokuthi yiProject Sangam olugcina imininingwane emafini obuchwepheshe bekhompuyutha nasezindaweni zokusebenza, kanti lutholakala kwi-app yohlobo locingo olunobuhlakani bobuchwepheshe i-Android kanye nangokusebenzisa uhlelo lwe-inthanethi oluxoxisana nomsebenzisi walo. Amanani okubiza edatha angancishiswa ngokusebenzisa uhlelo oluzayo lwamahhala olwenzelwe lokhu olwaziwa ngokuthi yiTshepo 1 million Wi-Fi Network, ezogqogqoshwa uhlelo lwezobuchwepheshe lokuxhumana lwaseGauteng. Wuhlobo olucatshangwa kakhulu, uma unokulangazelela, olungasiza ekusombululeni izinkinga eziningi ezikhona eNingizimu Afrika ezidlula ngamamayela okuyiyona okumele ixazululwe masinya okuyindlela yokwethula amakhono.
“Ngalokhu kuhlanganyela sizokwazi ukuthuthukisa kahle abasebenzi bakusasa – abasebenzi abayizinhlobo ezahlukahlukene, abaqhakambisa usikompilo lwentsha esebenzisa amakhono ayo ezobuchwepheshe ukwakha idolobha elihlumile losomabhizinisi nabasebenzi abanamakhono aphezulu.”
Ihhovisi likaHoosen lisesakhiweni sakwaMicrosoft South Africa esisemaphethelweni edolobha laseSandton, iBryanston. Imizi yakhona ebiza izigidi zamarandi kanye nezikole ezihloniphekile nokungesizo ezikahulumeni kuyinto lesi sidleke sabambalwa abasemafutheni
eGoli esibonakala ngayo kanti nohlu lokudla okudayisa enkantini ekhona lapho ngaphakathi yezinga eliphezulu nayo igcizelela izinga eliphakeme elikuso lesi sikhungo esikule ndawo. Ungalindela ukuthi ihhovisi loMqondisi Omkhulu libe netafula elimataniswa nalezi zikhundla, elikhulu, elide, nelibazwe ngokhuni olubizayo, mhlawumbe bese kuba khona nelinye elimafuhlufuhlu elikwelinye lamachopho ehhovisi. Sasicabanga ukuthi mhlawumbe siyofike sibone usofa owakhiwe ngesikhumba ngenkathi sisahlela ngengqondo. Kunalokho, sahlangabezwa wukuhleleka okuhlelelwe igumbi lemihlangano kanye nelephuthophu eyayihlezi kwelinye lamachopho ehhovisi. Izikhulu zala zilandela inqubomgomo yokuxhuma ikhompuyutha yazo kunoma iyiphi indawo yokusebenzela ekhona kule nkampani.
“Ngicabanga ukuthi ukugudluka kakhulu kwesikujwayele kuyoza mhla sahlanganisa ubuhlakani bokuzenzela nezisombululo zethu maqondana nokusebenza ngendlela ebonakalisa inzuzo. Khwiqiqi, ngenkathi usahlanganisa isethulo sakho, usebenzisa bona lobu buhlakani bokuzenzela osebutholakala kwiPowerPoint, lezi zinto ezakhiwe zizokusiza ukuba ufeze izinjongo ezimangalisayo,” kusho uHoosen ekhuluma ngombononhloso maqondana ne-Office yasesikhathini esizofika maduze.
“Kukhona nokuxhumana komsebenzisi wekhompuyutha kwemvelo,” eqhubeka. “Siyasuka manje siya kokuqondene nendlela umuntu amisa ngayo umzimba, izwi nokuthinta ngendlela eyenzeka sengathi kuyaxoxwa. Lawa yiwona madumela amabili ozowabona. Enye yezingqinamba ezinkulu ze4IR kuzoba wukuhlubuka. Uma ucabanga ngobuchwepheshe obenza kube khona ukulondoloza izinto emafini obuchwepheshe bekhompuyutha kanye nokwanda kwamandla ekhompuyutha, idumela elizolandela yilelo elimayelana nocwaningo maqondana nokuthuthukiswa kokuphathelene nekhompuyutha ngokulandela imigomo yesilinganiso samandla kanye nocwaningo, ngoba uMthetho kaMoore usuqala ukuphelelwa yindawo lapha kithina.”
Ukuhlanganisa i-Al nabantu emsebenzini kuyindlela enhle yokulwisana nedumela
lokufafaza ukwesaba maqondana nokwakhiwa kwezinto ezikwazi ukuzenzela. Amazwi kaHoosen aphinda lokho okushiwo iSikhulu Esiphakeme sakwaMicrosoft, uSatya Nadella, okholelwa wukuthi i-Al izokhulisa amandla abantu kuze kufike ezingeni lokuthi abakhubazekile bakwazi ukubamba iqhaza ngokuphelele ezintweni. Lokhu, ngokombono wezinzululwazi, kuvula amathuba ezisombululo ezintsha kanye nemishikashika ngenxa yokufinyelela ngendlela entsha kokucatshangiwe osekudlule kungabhekwanga.
Ukuhumusha okwenzeka ngaleso sikhathi, uMicrosoft aseqale ukukukhipha ukuba kusetshenziswe, kuveza isithombe sale ndawo yokusebenza yasesikhathini esizayo efaka konke. Okunye okwaziwa ngokuthi yiBabel Fish okugxile emafini okulondoloza imininingwane ngokobuchwepheshe bekhompuyutha, okunikwa amandla ukuthuthukiswa kokuphathelene nekhompuyutha ngokulandela imigomo yesilinganiso samandla kanye nocwaningo, kuzosusa nanoma iyiphi kanye nazo zonke izivimbo zokuxhumana ezikhona emathimbeni akhuluma izilimi ezahlukahlukene kuphinde kugqugquzele amazinga angakaze abonakale okuhlanganyela.
Ukusebenzisana emsebenzini kuqalwa ukufakwa emazingeni ayisisekelo njengangenkathi amakilasi enikezwa umsebenzi wokwakha kabusha isizinda esingumlando njengomsebenzinhloso weMinecraft. UMicrosoft wahlomula kakhulu ngenkathi uthenga umqondobuciko ngemali eyizigidigidi zamadola angu-2,5 ekupheleni kuka-2014. Lolu hlobo oluyimpumelelo lwebhizinisi elidayisekayo lomdlalo lwalungeyona into eyayingacabangeka njengethuluzi lezemfundo elinamandla ngalesiya sikhathi, kodwa le nkampani yakuveza lokhu ngokwethula iMinecraft: UHlelo Lwezemfundo ngo-2016, imihlomulo yokuba khona kobuchwepheshe bekhompuyutha obukhona manje ngukuthi abantwana bangafunda amakhono ezobuchwepheshe bekhompuyutha ngesikhathi esisodwa bebe bezilolonga ngokukwenza lokho abakufundayo endaweni elawuliwe.
“IMinecraft yenza ukuba sikwazi ukwenza abalandeli abasikhonzile ngoba leli bhizinisi elithengisekayo lihlumile entsheni. Okulandelayo esizocabanga ngakho manje ngukuthatha le midlalo siyisondeze ekufundeni.
UMicrosoft usethathe indawo yokuqala ebonakalayo maqondana nezisombululo zezikulukuqu zekhompuyutha zasesikhathini esizayo. Ndlelathizeni, amathuluzi e2-in-1 Hybrid Computing angathathwa njengeqoqo eliphakathi nendawo emikhiqizweni ngenkathi izwe lisabheka ukuthi, okokuqala, engabe ubuchwepheshe obulandelayo bokuhlangana kuzoba yini, okwesibili, amathuluzi abukeka kanjani uma kuyilawo azokwenza kuxhumaneke kahle naleyo nto exhumanisayo. Ngeke wakuphikisa ukuzimisela kwale nkampani ukugqugquzela imibono emisha maqondana nezikulukuqu zokusebenza.
Sonke sathi ukugigitheka kancane ngenkathi iWindows eqala elungiselela ukuzisebenzisa ngokuthinta nje kuphela. Indlela yokuziphatha ehlukene kabili yeWindows 8 kanye nendlela ikhompuyutha ebekwa edeskhini esebenza ngayo, kwaba yingqinamba enkulu. Manje abancintisani asebencintisane nabo isikhathi eside, abakwa-Apple sebezithola benengcindezi yokuba bemukele ukusebenza ngokuthinta ekubuyezekeni kwabo iMac Os okulandelayo. Abakwa-Apple baphendula bathini? Yenzani ukuba i-iPad ithandeke kakhulu njengekhompuyutha yasesikhathini esizayo.
Kodwa lezi zinkampani ezimbili zingabhekana ngeziqu zamehlo kahle nje emathuluzini azo ezinga eliphakeme ngenkathi uGoogle ududula iChrome OS ngenhloso yokuyifaka ekilasini. Ngeshwa, akubonakali sengathi seledume ladlula, kodwa imininingwane yabasebenzisi balezi zinto iveza ukushaywa indiva okukhulu kwesizinda uma abasebenzisi baso bengena emsebenzini. Uma abantwana sebeqala ukwenza imali yangempela, bayaqala bathenge amalephuthophu namathuluzi asebenza ngobuchwepheshe bekhompuyutha kwezinga eliphezulu nasebekwazi ukukuthenga ngemali abanayo. Noma yikanjani, lokho kuza nophawu lwaka-Apple ngemuva noma ngaphakathi kwiWindows.
Ingxenye eqavile ye-AR (okwenzekayo kwezinga elithuthukisiwe) yi-Al. Izizinda zeHololens zisebenza kahle kakhulu uma seziqala ukuhumusha ukunyakaza kwami ziqagele ukuthi yini elandelayo engifuna ukuyenza. Lokhu kuyisibonelo esihle kakhulu sohlobo lwamathuluzi abantu abazobe bewasebenzisa esikhathini esizayo,” kusho uHoosen. “Kuzoba yisizinda esixube okwenzekayo okwahlukahlukile nesinikeza abasebenzisa lokhu izindlela eziningi zokuxhumana bengenamkhawulo maqondana nesikhathi nendawo abakuyo. Okuxube okwenzekayo okwahlukahlukene kufaka kukho ukuvezwa kwesithombe esiphelele phakathi kwalokho okwenezeliwe nalokho okubonakala sengathi okwangempela kube kungesikho okwangempela.
UHoosen uphahlukile wasitshela ngombononhloso omkhulu maqondana nezikulukuqu ezisetshenziswa kanye nobuchwepheshe bekhompuyutha: ithuluzi elenza konke, nelisebenza ngezindlela ezahlukahlukene. Kuyindlela ethokozisayo yoshintsho lokhu kusuka kokuthize okuqondekayo lapha – kuyiwa ethuluzini elilodwa elingashintshashintsha indlela elisebenza ngayo – okuyinto abakhiqizi abaningi abaholela abasebenzisi bamathuluzi abo ngakuyo.
Empeleni, yindlela ezojabulisa wonke umuntu ngokuthi abasebenzisi bala mathuluzi bazothenga lawo ahambisana nabo ngokwemali abanayo nangokwendlela abaphila ngayo. Kuningi okwabonakala okuhambisana nalokhu kucabanga ngesikhathi seWindows yango-2000 yamathuluzi amancane okwazi ukuhamba nawo eyayingeke isebenze ngempumelelo. Umbono wokuba nesizinda sokusebenzela sobuchwepheshe bekhompuyutha esihlangene ungasebenza kahle nasezikulukuqwini okungesizo ezezinga eliphezulu njengoba kwenzeka nasemathuluzini ezinga eliphezulu. Ukusebenziseka ngezindlela eziningi kwamathuluzi ahlukahlukene okugcina izindlela zokuxhumana ezingaguquguquki, nokuvumela abasebenzisi bawo ukuba bafunde indlela eyodwa yokuxhumana bese bethumela amakhono ezobuchwepheshe bekhompuyutha ngendlela eyimpumelelo besemgwaqweni aye ehhovisi.
Eminyakeni emine edlule, ngamemezela uMicrosoft njengoholayo emhlabeni wonke jikelele ekukhiqizweni kwezinhlelo zokusebenza ezisebenzisana nekhompuyutha. Lokhu kweza ngemva kwesimo esibi esenzeka maqondana nezinhlelo ze-Office zebhrendi engaziwa kanye nesifundo esahlinzekwa unkosikazi wami sokuthi abantu mabathenge imikhiqizo yeqophelo elifanele. I-Office 365 waletha impilo entsha endleleni okuqhubeka ngayo umsebenzi wami, ngisanda kuqala manje nje ukusebenzisa imihlomulo eyengeziwe, njengobukhulu benkundla engangeterabyte etholakala emafini alondoloza imininingwane ngokobuchwepheshe bekhompuyutha, nokuthuthukisa indlela engisebenza ngayo mihla yonke ebonakalisa inzuzo. Ngiyayifisa iSurface Laptop neSurface Studio, kanti le yakamuva ngiyincoma ngenxa yokukhula kwayo ngokwezinga lobuhle ohlotsheni lwekhompuyutha oluhlala phezu kwedeskhi. AbakwaMicrosoft basethubeni elihle njengamanje, kodwa basadinga ukulungisa izinkinga zabo zezikulukuqu ezisetshenziselwa ubuchwepheshe bekhompuyutha kulo mkhakha wezezimakethe, okungenani
WIN A Huawei Mate 20 Pro worth R19 000!